QEMU 6.1 waxay la timaadaa sirta qalabka, taageerida looxyo badan iyo waxbadan | Laga soo bilaabo Linux
Siideynta nooca cusub ee QEMU 6.1 kaas oo in ka badan 3000 oo isbedel ay sameeyeen 221 horumariye, kuwaas oo hagaajinta xakamaynta, iyo sidoo kale taageero looxyo badan oo Cortex-M3 ay ka muuqato, hagaajinta PowerPC, taageerida qarinta qalabka, ka mid ah isbeddelada kale.
Kuwa aan aqoon u lahayn QEMU, waa inay ogaadaan inuu yahay software kaas wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku socodsiiso barnaamij la soo ururiyey oo loogu talagalay mashiinka qalabka ee nidaamka leh qaab dhismeed gebi ahaanba ka duwanTusaale ahaan, si aad u socodsiiso arjiga ARM PC -ga x86 ee ku habboon.
Wararka ugu waaweyn ee QEMU 6.1
Noocan cusub ee QEMU 6.1, waxaan ku heli karnaa taas si toos ah, Taageero dheeri ah oo loogu talagalay soo -saare koodh TCG (Tiny Code Generator) classic waa karti iyo fulintaas cusub (diiwaanka fulinta) iyo qaabaynta kaydka (jilitaanka dhaqanka kaydka L1 ee CPU) ayaa lagu daray.
Waxyaabo kale oo cusub oo ka muuqda qaabkan cusub ayaa ah taageero dheeraad ah looxyada ku salaysan chips Aspeed (rainier-bmc, quanta-q7l1), npcm7xx (quanta-gbs-bmc) iyo Cortex-M3 (stm32vldiscovery) oo ku jira emulatorka ARM.
Halka dhinaca taageero loogu talagalay moodooyinka cusub ee Intel CPU ee kujira emulator x86 Lagu daray Skylake-Client-v4, Skylake-Server-v5, Cascadelake-Server-v5, Cooperlake-v2, Icelake-Client-v3, Icelake-Server-v5, Denverton-v3, Snowridge-v3, Dhyana-v2 kuwaas oo fuliya tilmaamaha XSAVES.
Intaad ku jirto GUI, el taageera aqoonsiga sirta ah marka hab maamuuska la isticmaalo VNC hadda waa la awooday oo kaliya marka la dhiso oo leh gadaal gadaal crypto (gnutls, libgcrypt, ama nettle).
Waxaan kaloo ogaan karnaa inaan ogahay taageero dheeraad ah oo ku saabsan sirta qalabka iyo matoorada hashing -ka ee lagu bixiyo jajabyada Aspeed, tan sidoo kale waxaa weheliya taageeridda ku -dayashada tilmaamaha SVE2 (oo ay ku jiraan bfloat16), hawlwadeennada isku -dhufashada shaxanka, iyo amarrada daadinta xirmooyinka tarjumaadda isbahaysiga (TLBs).
Emulator-ka dhismaha PowerPC “pseries” loogu talagalay mashiinada ku dayashada lehs waxay ku dartay taageero lagu ogaanayo guuldarooyinka fur -kulul deegaannada martida cusub, waxay kordhisay xadka CPU waxayna hirgelisay ku -dayashada tilmaamaha qaarkood oo u gaar ah hawl -wadeennada POWER10.
Intaa waxaa dheer, waxaa lagu xusay sida darawalka sirta mudnaanta, gnutls ayaa la isticmaalaa, taas oo ka horraysa kantaroolayaasha kale xagga waxqabadka, halka koontaroolaha ku salaysan en libgcrypt oo aan hore loo bixin ayaa loo wareejiyay ikhtiyaar iyo darawalka ku salaysan nettle ayaa looga tagay sidii beddel loogu adeegsan lahaa maqnaanshaha GnuTLS iyo Libgcrypt.
Isbeddelada kale oo ka soocan noocyadan cusub ee QEMU 6.1:
Taageerada PMBus iyo I2C multiplexers (pca9546, pca9548) ayaa lagu daray emulator I2C.
Emulator-ka RISC-V wuxuu taageeraa madal OpenTitan iyo virtio-vga GPU-ga (oo ku saleysan virgl).
Emulator -ka s390 wuxuu ku darayaa taageero jiilka 16 -aad ee CPU -yada iyo fidinta vector -ka.
Taageero lagu daray guddiyada ku saleysan Genesi / bPlan Pegasos II chips (pegasos2).
Emulator chipset -ka Q35 (ICH9) wuxuu taageeraa xiridda kulul ee aaladaha PCI. Ku -dayashada hagaagsan ee fidinta dheef -shiid kiimikaadka ee lagu bixiyo hawl -wadeennada AMD.
Taageerada tijaabada ee qeexitaanka ePMP
Taageerada hore ee fidinta tijaabada Bit Manip
Waxaa lagu daray ikhtiyaarka bas-quful-ratelimit si loo xaddido xoojinta qufulka baska nidaamka martida.
Waxaa lagu daray "blockdev-reopen" amarka QMP (QEMU Machine Protocol) si loo beddelo qaabeynta aaladda xannibaadda ee horay loo abuuray.
Taageero ayaa loogu daray isticmaalkeeda sida dardar -geliyaha NVMM hypervisor oo uu soo saaray mashruuca NetBSD.
Finalmente hadaad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato ee isbeddelada iyo waxyaabaha cusub ee lagu soo bandhigay nuqulkan cusub ee QEMU 6.1, waxaad ka eegi kartaa faahfaahinta iyo inbadan xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » QEMU 6.1 waxay la timaadaa sirta qalabka, taageerada looxyo badan iyo in ka badan
Hanjabaadaha GNU / Linux iyo Nuglaanta: Ogow Cadowgaaga!